Amin’ny Chat roulette (Omegle) no tena malaza toerana ho an’ny lahatsary fifandraisana, izay iray hafa malaza amin’ny chat roulette.»Iray hafa.»Dia manontany. Ity tranonkala ity dia tsy toy ny hafa clones ny Chatroulette, raha ny fitsipiky ny kisendrasendra interlocutor fifantenana no tonga eto.
Omegle amin’ny chat nisy mpihaino alohan ‘ny hahatongavan’ ny Mampiaraka asa amin’ny alalan’ny webcam. Tamin’ny voalohany, nisy olona miresaka amin’ny kisendrasendra lahatsoratra amin’ny chat. Fotoana elaela taty aoriana dia ny fahafahana nitsangana mampiasa ny lahatsary fakan-tsary sy ny mikrô. Izany dia nitondra Omegle na dia malaza kokoa.
Nahoana ny amin’ny Chat roulette dia tsy toy ny hafa safidy amin’ny chat roulette. Ny zava-misy fa tsy misy hafa kely interface tsara, fa izany no azo atao ihany koa ny fikarohana tiany ny interlocutors amin’ny toy izany mahaliana.
Ankoatra izany, afaka mamaritra ny teny izay te-hifandray
Amin’ny Chat roulette tsy mitaky ireo mpampiasa ny fisoratana anarana. Ny lazany dia mampiseho ny mifanohitra ny mpitsidika an-tserasera, izay mampiseho ny tena avo dia avo (arivo mpampiasa aterineto).
Ity tranonkala ity dia ho liana ny maro: ary ireo izay tsy manana webcam, sy ireo izay efa nahavita ny hividy. Ny fahamarinana dia hita ao amin’ny lahatsary amin’ny chat tena vitsy ny olona izay zara raha mifandray amin’ny teny anglisy, tsy lazaina intsony ny rosiana. Manoro hevitra anao aho mba tsy ho maika nitranga ny adiresiny mba vahiny, satria na inona na inona mety hitranga.
Ampitaina ao amin’ny tranonkala ity, dia afaka mahita fa ny amin’ny Chat roulette dia tena malaza eo amin’ny mponina any Inde, Indonezia, Philippines. Izany koa dia mahazatra sy ny olona any Torkia, sy ireo firenena Afrikana
Afaka mihaona - fandikan-teny frantsay. la malagasy-rakibolana frantsay →